Hakuzovi refu kusvikira mutambo kicks kure, saka ita shuwa kuti wagadzirira neTomorrowland neTrain matikiti. Tomorrowland kuitika pakupera kwevhiki mbiri 2018. Ndicho okupedzisira maviri vhiki muna July: 20-22nd it uye yechi27- 29fung. The Kuunganidza, inova chiitiko pre-mutambo campers muna Dreamville, paruchaitika July rechi19 uye July 26th kuti vhiki 2.
Tomorrowland iri pasina mubvunzo iyo yakanakisa mimhanzi mutambo munyika. Dzimwe nyika dziri ku Tomorrowland kupfuura kumaOlympics. Zviri Zvechokwadi rakasiyana ruzivo uye nzira yakarurama kuti anzwe kwakabatana. Gore negore inokura yakatokura, saka regai kuwana uchiremerwa pamwe vazhinji nokuva kugadzirira, kusvika Tomorrowland nechitima.
Tomorrowland anotora nzvimbo panguva zvinotivaraidza nharaunda, De Schorre, muBoom. Taundi reBoom riri mu Bherujiyamu, pakati Antwerp & kweBrussels. taundi duku iri rinochinja kuva bato Chiitiko. Kazhinji rimwe taundi yakanyarara kuti kuratidza Tomorrowland petsanga pamahwindo avo pamutambo.
Buruka pachiteshi cheBoom uye utore yemahara yekufambisa bhazi kuenda Tomorrowland / DreamVille. Tapedza mutambo zuva, zvimwe zvitatu usiku nezvitima vachamhanya kuna Antwerp Central Station.
Zvino kuti isu hatina akakupai kwazvo mashoko pamusoro Tomorrowland nechitima, inguva yokuti mafaro chikamu! Kana nguva yako yokutanga kuenda Tomorrowland, muri pamwe kushamisika kuti chii chiri kuitika kufanana. Tomorrowland ndechimwe zviripo hype kuti zvakasikwa akapoteredza. Tomorrowland rave zvokusarudzwa ari undisputed mukuru EDM mumhanzi mutambo munyika kwemakore akawanda achimhanya. Yekushanyirana kanenge kamwe chete inenge ichirarama rava kunofanira chipi mumhanzi feni, pati goer kana mutambo Zvokutopenga. Tomorrowland 2018 ari kuumba kuve mukurusa munhoroondo yemutambo. Iyo ine chaiyo inoshamisa nhamba yeinoshamisa epasirese maartist akaisirwa kujekesa iyo 16 incredible nzendo.
Kunze ane incredible lineup, musangano sokuti akafunga zvose, kusanganisira lockers unogona haya, nzvimbo kubhadharisa foni yako uye kunyange mari yavo inonzi Pearls. Une mikana yakasiyana kuti top-up rundarira yako Pearls: Unogona kuwedzera Maparera pamhepo pane yako Tomorrowland Account, panguva Tab 'ndarira My’ pamberi pamutambo wako kadhi (vhiza, Mastercard), Bancontact, Sofortüberweisung kana iDeal. Iyi inonyatso kuve nzvimbo kwaunogona kusiya zvese zvinokunetsa kumashure!
Kune chero European chitima matikiti, uye kunyanya Tomorrowland nechitima kubva zvose pamusoro Europe, chete Enter Save A Train Website uye kunakidzwa kwako chitima tasva.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftomorrowland-by-train%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)